चम्चा’ भन्‍ने भारतीय सेनाप्रमुख किन आँउदैछन् नेपाल ?
October 16, 2020 October 16, 2020 adminLeaveaComment on चम्चा’ भन्‍ने भारतीय सेनाप्रमुख किन आँउदैछन् नेपाल ?
काठमाडौं । नेपालले आफ्नो नक्सा जारी गर्दैगर्दा भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेले नेपाल चीनको ‘चम्चा’ भनेपछि च`र्को वि`रोध भयो । उनी उक्त टिप्पणी फिर्ता लिन बा`ध्य भएका थिए ।
“वास्तवमा, नेपाली राजदूतले काली नदीदेखि पूर्वको क्षेत्र उनीहरुको भनी उल्लेख गरेका छन् । त्यसबारे त कुनै विवाद नै छैन । हामीले बनाएको सडक त नदीभन्दा पश्चिमपट्टि रहेको छ । त्यसकारण, उनीहरु किन आन्दोलित भइरहेका छन्, मलाई थाहा छैन,” उनको दा`बी छ । उनले चीनतर्फ संकेत गर्दै नेपाललाई उचालिरहेकोसमेत आरोप लगाएका थिए ।
दुई देशबीच कुटन‍ीतिक र राजनीतिक सम्बन्ध चिसिएका बेला फेरि भारतीय सेना प्रमुख नरवणेले नोभेम्बरमा नेपाल भ्रमण गर्ने भएका हुन् । यो भ्र`मणको मिति तय हुनुले दुई सेनाका उच्चतहका सैनिक अधिकारीहरु बीचको संवाद कायमै रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ
सेनाध्यक्ष भएयता नरवाणे नेपाल आएका छैनन् । नेपाल र भारतका सेनाप्रमुखले जिम्मेवारी सम्हालेपछि एक अर्काको देशमा गएर मानार्थ सेना प्रमुखको उपाधि लिने चलन छ । नेपालका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले भारत पुगेर उक्त उपाधि लिइसकेका छन्। सन् १९५० देखि दुई देशका प्रधानसेनापति बहाल भएपछि एकअर्कोमा गएर मानार्ध उपाधि लिने चलन सुरु भएको हो ।
नरवणेको नेपाल भ्र`मण गत वर्ष नै तय भएर पनि बन्दाबन्दीको कारण स्थगित भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले उनको नेपाल भ्र`मण सम्बन्धी प्र`स्ताव गत वर्ष माघमा नै स्वीकृत गरी आवश्यक तयारीका लागि रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनालाई निर्देशन दिइसकेको थियो ।
सैनिक मुख्यालय स्रोतका अनुसार नरवणे‍को आगामी कात्तिकमा हुने ३ दिने भ्रमण नेपाली सेना र भारतीय सेनाबीच रहिआएको परम्पराको निरन्तरता भए पनि यसबाट नेपाल र भारतका बीचमा पछिल्ला दिनहरुमा देखा परेको संवादहीनता अन्त्य भई ‘आइस ब्रेक’ गर्न महत्वपूर्ण योगदान हुने विश्वास गरिएको छ ।
भारतीय सत्ता पक्षका कतिपयले नेपालसँग झुकेको सन्देश जाने भन्दै नेपालसँग कुनै पनि तहको वार्ता वा भ्र`मण नगर्न द`बाब दिँदै आएको अवस्थामा पनि सेनापति नरवणे‍ले नेपाल भ्रमण गर्न लागेको कदमले दुई देशका सेनाबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा प्र`स्तुत गर्ने अधिकारीहरु बताउँछन् ।
नरवणेको नेपाल भ्र`मणले दुई देशबीच सैनिक कुटनीतिमार्फत थप अ`न्तरक्रियालाई खुल्ला गर्न भारत इच्छुक रहेको सन्देश दिन खोजेको पनि देखिएको छ । नरवाणे‍ले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मानार्थ प्रधानसेनापतिको उपाधि ग्र`हण गर्नेछन् ।